Dowlada Federalka Soomaaliya ayaa 24-kii saac ee ugu dambeeyey waxaa ay Ahlu sunna ka qabsatay degmooyinka Matabaan(Hiiraan) iyo Guriceel(Galgaduud), arrintan oo khasaare nafeed ay ka dhalatay. – Damqo
Dowlada Federalka Soomaaliya ayaa 24-kii saac ee ugu dambeeyey waxaa ay Ahlu sunna ka qabsatay degmooyinka Matabaan(Hiiraan) iyo Guriceel(Galgaduud), arrintan oo khasaare nafeed ay ka dhalatay.
Wadaadda Ahlu sunna oo 11-kii sano ee ugu dambeeyey waxaa dagaal qaraar la galeen Al Shabaab ayagoo ka qabsatay degmooyinka sida Matabaan(Hiiraan) iyo Dhuuso mareeb Guriceel(Galgaduud), iyo magaalooyin kale oo badan dagaladaasoo khasaare nafeed iyo maal lagu waayay.
Maxaa ka dhalan kara? Su’aashaasi ayaa waxaa la hordhigay agaasimaha machadka Hiraal Xussein Sheikh Maxamuud isaga oo sheegay in talaabbadan dowladda ay dhaawac u geysan doonto hannaanka dhismaha maamulka dowlad goboleedka Galmudug.
“Maamulka dhismaya ee Galmudug ma noqon doono mid ay ku wada jiraan saamileyda oo dhan, mana heli-doono sharciyad haddii aan Ahlu-sunna qeyb ka noqon” ayuu intaasi raaciyey.
Waxaa kale oo uu qabaa agaasime Xuseen in Al-shabaab ay naf ku soo laaban-doonto, oo khatar iman doonto, isaga oo ka hadlayana waxaa uu yiri “Ahlu sunna waa kooxda keliya ee iska dhicisay kooxda Al-shabaab, la’aantood waxaa ay Al-shabaab gaari lahaayeen ilaa waqooyoga sida Berbera iyo Hargeisa” isaga oo ku dooday in Al-shabaab heli-doonaan fursad aaney abidkood ku riyoon, wax badanna iska badli-doonaan qorshihii ladagaalanka argixisada
Ugu dambeyntii, agaasimaha Hiraal Xuseen Sheekh ayaa sheegay in ujeedka dowladda ka leedahay qabashada magaalooyinka Ahlu-sunna uu yahay qorshe la xiriira dowladda kadibna marka ay soo laabtaan ciidamada halkaasi loo daabulay, istaagtana lacagta la xiriirta doorashada ay Ahlu-sunna heli-doonto waxa rabto, dib u soo laaban-doonto awoodeeda
Previous Guddoomiyaha Dhuusamareeb ee Ahlusunna oou janjeersaday dhinaca doolada Dowladda (Dawo)
Next Magaalada Doxa ee dalka Qatar oo Maanta Shir uga furmo Wasiirada Arrimaha Dibadda ee dalalka ku jira Ururka Iskaashiga Islaamka ee loo soo gaabiyo OIC